Ny zavamaniry vs Zombies 2 dia misy manerantany | Vaovao IPhone
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia namoaka ny lalao vaovao ny PopCap: Plants vs Zombies 2 any amin'ny firenena sasany toa an'i Nouvelle-Zélande sy Aostralia ho an'ny olom-pirenenan'ireto firenena ireto hitsapana ny fangatahana sy hamantatra izay lesoka rehetra, zavatra hanatsara ny fananana zato isan-jato ny lalao alohan'ny hamoahana azy amin'ny Apps Stores rehetra eran'izao tontolo izao sy amin'ity indray mitoraka ity, Anisan'izany i Espana.
Omaly alina dia efa afaka nisintona isika Plants vs Zombies 2 maimaim-poana tanteraka amin'ny App Store manerantany, ao anatin'izany ny Espaniôla. Araka ny noeritreretin'izy ireo mialoha, ho an'ny iOS irery no misy azy io. Efa nanandrana ny lalao aho ary mamporisika anao hampidina azy izao satria mendrika izany ary misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny tohiny voalohany sy faharoa amin'ilay lalao lehibe Plants vs. Zombies avy amin'ny PopCap. Aorian'ny fitsambikinana dia mamakafaka ny lalao izahay.
1 Zavamaniry vs Zombies Tantara 2
2 Manampy amin'ny ady amin'ny zombies
3 Haavo be pitsiny raha miezaka isika
Zavamaniry vs Zombies Tantara 2
Raha efa naneho hevitra tamin'ny lahatsoratra sasany tao amin'ny iPad News izahay, Plants vs. Zombies 2 dia manana tantara manan-danja miaraka amina singa iray manandanja: mandeha miverina ara-potoana miaraka amin'ny karajia izay afaka mitondra antsika hiverina ara-potoana. Ny fitsangatsanganana taloha dia nateraky ny fitaintainanan'i Dave sakaizantsika hihinana taco indray. Raiso ny karajia ary mandeha any amin'ny tanàna an'arivony taona maro lasa izay isika miady amin'ireo zombie izay manana hery manokana izao ny fomba hisarihana ny masoandro mamorona voninkazo na latsaka avy eny amin'ny lanitra.
Fitsangatsanganana fotoana, Plants vs Zombies 2 dia izany, mitety ny vanim-potoana samihafa eto an-tany izay iainantsika miady amin'ny zombies amin'ny zavamaniry misy antsika, izay, eny, misy vaovao.
Manampy amin'ny ady amin'ny zombies
Tsy maintsy ekena fa ny ambaratonga sasany dia ho an'ny manam-pahaizana amin'ny Plants vs Zombies 2 ary izany no antony PopCap dia nanampy andraikitra roa tamin'ny lalao izay hanampy antsika hiady amin'ny zombies:
Sakafo: Isaky ny ambaratonga dia manomboka amin'ny sakafo mahavelona 3 isika. Ny otrikaina tsirairay dia misy fiantraikany amin'ny zavamaniry tsirairay amin'ny fomba hafa, izany hoe raha mampiditra otrikaina amin'ny tanamasoandro isika dia manomboka mamorona masoandro tsy tapaka mandritra ny fotoana fohy. Raha mifanohitra amin'izany no ampiharintsika amin'ny zavamaniry mandroaka ny "baomba" mandritra ny fotoana fohy, dia handroaka olona maro misesy izy io. Mba hahazoana otrikaina dia vonoy fotsiny ireo zombie mitsipozipozy, izay midika fa misy otrikaina amin'izy ireo.
Fanampin'angovo: Manana fitaovam-piadiana kintana 3 ihany koa izahay hiadiana amin'ny zombies, saingy samy manana ny azy (vola madinika) ny tsirairay. Mandritra ny fotoana iray dia hahafahantsika: fiantraikany, herinaratra o fandefasana ny zombie hisorohana azy ireo tsy hahatratra ny trano. Tiako ny manintona, saingy mazava ho azy, ny tena mahomby indrindra dia ny herin'ny Plants vs Zombies 2 izay manome herinaratra an'ireo zavaboary ireo.
Haavo be pitsiny raha miezaka isika
Isaky ny ambaratonga dia afaka mahazo vola madinika, lakile, kintana, farantsakely betsaka kokoa isika ary fanalahidy bebe kokoa ... sarintany (maze) izay misy ambaratonga sasany toa mihidy. Raha hanokatra ireo ambaratonga ireo dia tsy maintsy mahafeno ny fepetra takian'izy ireo izahay: isan'ny lakile, isan'ny farantsa volamena, kintana ...
Mendrika handany ny lakile, vola madinika na kintana ve ianao? Indraindray eny satria rehefa miditra amin'ny haavo isika dia afaka mahita zavamaniry vaovao mamono zombies haingana kokoa noho ny zavamaniry mahazatra.
Fanazavana fanampiny - Ny zavamaniry vs. Zombies 2 dia manomboka ao Aostralia sy Nouvelle Zélande
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Ny zavamaniry vs Zombies 2 dia misy manerantany
FARES Grijalva dia hoy izy:
Fantatrao ve fa efa misy mifanentana amin'ny iOS 7?
Valiny amin'i FARES Grijalva
Firy ny lakilaka ilaiko handalovana an'i Egypt manomboka amin'ny ambaratonga faha-3?
Ny zavamaniry vs Zombies 2 dia misy izao